ukuthuthukiswa kwekhamera ye-drone/UAV oblique yokubhala imephu - i-Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Inkampani ye-High-tech, egxile ekuthwebuleni izithombe ezitshekile, iyaqhubeka nokusungula izinto ezintsha.
Thola ngomlando wenkampani yethu kanye nabantu abasemuva kwayo.
Ake sibuyisele emuva isikhathi ku-2011, insizwa esanda kuthweswa iziqu ze-Master degree e-Southwest Jiaotong University, inentshisekelo enkulu kumamodeli we-drone.
Washicilela isihloko esibizwa ngokuthi "Ukuzinza Kwe-Multi-Axis UAVs", eyadonsa ukunaka kukaprofesa odumile wasenyuvesi. Uprofesa wanquma ukuxhasa ucwaningo lwakhe mayelana nokusebenza kwe-drone kanye nezicelo, futhi akazange amdumaze uprofesa.
Ngaleso sikhathi, isihloko esithi "Smart City" sase sishisa kakhulu eChina. Abantu bakhe amamodeli e-3D ezakhiwo ikakhulukazi ancike ezindizeni ezinophephela emhlane ezinkulu ezinamakhamera anokucaca okuphezulu (njengesigaba sokuqala se-XT ne-XF).
Lokhu kuhlanganiswa kunezihibe ezimbili:
1. Intengo ibiza kakhulu.
2. Kunemikhawulo eminingi yendiza.
Ngokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe be-drone, ama-drones ezimboni angenise ukukhula okuqhumayo ngo-2015, futhi abantu baqala ukuhlola ukusetshenziswa okuhlukahlukene kwama-drones, okuhlanganisa nobuchwepheshe be- "oblique photography".
I-Oblique photography iwuhlobo lokuthwebula kwezithombe zasemoyeni lapho i-eksisi yekhamera igcinwa itshekisiwe ngamabomu isuka mpo nge-engeli ecacisiwe. Izithombe, ezithathwe kanjalo, zembula imininingwane efihlwe ngezindlela ezithile ezithombeni eziqondile.
Ngo-2015, lo mfana wahlangana nomunye umfana oye waqoqa iminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho emkhakheni wokuhlola nokubhala amamephu, ngakho banquma ukuthola inkampani egxile ekuthwebuleni izithombe ezitshekile, ebizwa ngokuthi i-RAINPOO.
Banqume ukwakha ikhamera enamalensi amahlanu eyayilula futhi incane ngokwanele ukuba ingathwalwa kundiza, baqale bahlanganisa ama-SONY A6000 amahlanu, kodwa kwavela ukuthi ukuhlanganiswa okunjalo akukwazi ukuzuza imiphumela emihle, kusenzima kakhulu, futhi ayikwazi ukuqhutshwa ku-drone ukwenza imisebenzi yokudweba imephu enembe kakhulu.
Banquma ukuqala indlela yabo emisha kusukela phansi. Ngemva kokufinyelela esivumelwaneni ne-SONY, basebenzise i-cmos yakwa-Sony ukuze bakhe i-lens yabo yokubona, futhi le lensi kufanele ihlangabezane namazinga womkhakha wokuhlola nokubhala amamephu.
Riy-D2:umhlaba's isibhakela oblique ikhamera ukuthi phakathi 1000g(850g), lens optical yakhelwe ngokukhethekile ukuhlola nokubhala imephu.
Lokhu kwaba impumelelo enkulu. Ngo-2015 nje, badayise amayunithi angaphezu kuka-200 e-D2. Iningi lazo laliqhutshwa ngama-multi-rotor drones emisebenzini encane yokumodela ye-3D. Nokho, ngenani elikhulu elinemisebenzi yokumodela ye-3D yezakhiwo eziphakeme, i-D2 namanje ayikwazi ukuyiqeda.
Ngo-2016, i-DG3 yazalwa. Uma kuqhathaniswa ne-D2, i-DG3 yaba lula futhi yaba yincane, ngobude obude bokugxila, isikhathi esincane sokuchayeka singama-0.8s kuphela, ngokususa uthuli nemisebenzi yokukhipha ukushisa ... indawo ye-3D yokumodela imisebenzi.
Nakulokhu, i-Rainpoo ihole inkambiso emkhakheni wokuhlola nokubhala imephu.
I-Riy-DG3: Isisindo 650g, ubude bokugxila 28/40 mm, isikhathi esincane sokuchayeka singu-0.8s kuphela.
Kodwa-ke, ezindaweni zasemadolobheni eziphakeme kakhulu, ukumodela kwe-3D kusewumsebenzi onzima kakhulu. Ngokungafani nezidingo zokunemba okuphezulu emkhakheni wokuhlola nokubhala, izindawo eziningi zohlelo lokusebenza ezifana namadolobha ahlakaniphile, izinkundla ze-GIS, ne-BIM zidinga amamodeli ekhwalithi ephezulu e-3D.
Ukuze kuxazululwe lezi zinkinga, okungenani amaphuzu amathathu kufanele ahlangatshezwe:
1.Ubude bokugxila obude.
3. Isikhawu sokuchayeka esifushane.
Ngemuva kokuphindaphinda kaningana kokubuyekezwa komkhiqizo, ngo-2019, kwazalwa i-DG4Pros.
Ikhamera etshekile enohlaka olugcwele eqondiswe ngokukhethekile ukumodela kwe-3D kwezindawo zasemadolobheni eziphakeme kakhulu, enamaphikseli angu-210MP esewonke, nobude bokugxila obungu-40/60mm, kanye nesikhawu sesikhathi sokuchayeka esingu-0.6s.
I-Riy-DG4Pros:uhlaka olugcwele, ubude befocal 40/60 mm, isikhawu sesikhathi sokuchayeka singu-0.6s kuphela.
Ikhamera etshekile enohlaka olugcwele eqondiswe ngokukhethekile ukumodela kwe-3D kwezindawo zasemadolobheni eziphakeme, enamaphikseli angu-210MP esewonke, nobude bokugxila obungu-40/60mm, kanye nesikhawu sesikhathi sokuchayeka esingu-0.6s.
Kuleli qophelo, uhlelo lomkhiqizo lwe-Rainpoo luphelele kakhulu, kodwa indlela yokuqamba emisha yalaba bafana ayizange ime.
Bahlale befuna ukuzidlula bona, futhi bakwenza.
Ngo-2020, kuzalwa uhlobo olulodwa lwekhamera ye-oblique echitha umbono wabantu - DG3mini.
I-Weight350g,i-dimensions69*74*64,ubuncane besikhathi sokuchayeka-isikhawu esingu-0.4s, ukusebenza okuhle nokuzinza......
Kusukela eqenjini labafana ababili kuphela, kuya enkampanini yamazwe ngamazwe enabasebenzi abangu-120+ nabasabalalisi abangama-50+ nabalingani emhlabeni wonke, kungenxa yokuthatheka “ngokusungula izinto ezintsha” nokuphishekela ikhwalithi yomkhiqizo okwenza i-Rainpoo ibe njalo ngokuqhubekayo. ukukhula.
Lena yi-Rainpoo, futhi indaba yethu iyaqhubeka......